Fanampiana Diatomite Filter
Vokatra Calcined Diatomite
Diatomite Flux Calcined vokatra
Tany diatomita voajanahary
Fanampin'ny pestiside sy vovoka
Additives manokana ny pestiside
Vovoka famonoana bibikely
Sakafo biby mineraly
Ny ekipa sy ny mpanjifantsika
Tany Diatomaceous ho an'ny famonoana bibikely
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-02
Efa nandre momba ny tany diatomaceous, fantatra koa amin'ny hoe DE? Eny raha tsy izany dia miomàna ho talanjona! Ny fampiasana ny tany diatomaceous ao amin'ny zaridaina dia tsara. Tany Diatomaceous dia vokatra voajanahary rehetra mahatalanjona izay afaka manampy anao hamboly zaridaina tsara sy mahasalama. Inona ny tany Diatomaceous? Di ...
Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny Fihaonamben'ny Indostrian'ny Mineraly tsy metaly tamin'ny taona 2020
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-08
Ny "Fihaonamben'ny indostria mineraly tsy metaly metaly sy fampiratiana" 2020 izay natolotry ny fikambanan'ny indostria mineraly tsy metaly dia natao tao Zhengzhou, Henan ny 11 hatramin'ny 12 novambra. Tamin'ny fanasan'ny China Non-Metal Mining Ind ...
Mifanome tanana handresy ny ady amin'ny valanaretina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-02-03
Tamin'ny 3 Febroary 2020, tamin'ny fotoana sarotra niadiana tamin'ny “valan'aretina”, Jilin Yuantong Mining Co., Ltd., mba hanohanana ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina coronavirus vaovao, dia namoaka tatitra vaovao tany amin'ny tanànan'i Linjiang tamin'ny alàlan'ny ny Indostria sy ny fampahalalana ao amin'ny tanànan'i Linjiang ...
Valan-javaboahary indostrialy Diatomaceous, Linjiang City, faritany Jilin, Sina
Skype: Mey Lv